Uncategorized - Recent Nepal News
February 24, 2021 adminLeaveaComment on आफ्नी पूर्व प्रेमिकालाई बसभित्र ३० भन्दा बढी पटक च’क्कू घो’ पे, भीड बन्यो रमिते
एजेन्सी । आफैले माया गरेको मानिस प्रति यति धेरै घ्रि णा कसैले गर्न सक्छ होला ? कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । तर एक युवकले आफुले माया गरेकी पूर्व प्रेमिकालाई कसैले पनि कल्पना समेत गर्न नसक्ने सजाय दिएका छन् । बस यात्रामा रहेका बेलामा मानिसको भिडमै युवकले पूर्व प्रेमिकालाई ३० पटक भन्दा बढी च क्कु […]
February 24, 2021 adminLeaveaComment on पल शाहले खोले विवाह नगर्नुको रहस्य! हेर्नुहोस् भिडियो सहित !
पल शाहको पहिलो भिडीयो तिम्रो यादमा रहन्छु अचेल हो जसले उनलाई पनि चर्चित बनायो । उनले चलचित्र क्षेत्रमा नाई नभन्नु ल ४ बाट डेब्यु गरेका हुन । उनी यस क्षेत्रमा २०१२ देखी हालसम्म सकृय छन् । सामाजिक सेवामा समेत सक्रिय रहेका पलले आफूले भने घर बनाएपछि मात्र बिहे गर्ने बताएका छन् । दैनिक एउटा म्यूजिक […]
फाल्गुन ११ ,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो ।मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र […]
February 22, 2021 adminLeaveaComment on गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याएरै छाड्छौँ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अनौपचारिक वार्ता भइरहेको बताएका छन् । वेदकोट नगरपालिका–२, छेलामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको आज अपराह्न शिलान्यास गर्दै उनले गुमेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा भारतसँगको महाकाली सन्धिबमोजिम १० क्युसेक पानी नेपालले पाउनुपर्नेमा नपाएकामा […]
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार लागिपरेको छ – प्रधानमन्त्री !
February 19, 2021 adminLeaveaComment on समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार लागिपरेको छ – प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरता खोज्ने प्रयास निस्तेज गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। उनले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रभित्रबाट अस्थिरता खोज्ने प्रयास निस्तेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ओलीले प्रणालीगत हिसावले विभिन्न संघर्षमार्फत नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा आइपुगेको बताउँदै यो प्रणालीलाई अझ जीवन्त बनाएर अगाडि […]
कसरी ह्वात्तै घट्यो फेवातालको पानी ?
February 6, 2021 adminLeaveaComment on कसरी ह्वात्तै घट्यो फेवातालको पानी ?
पोखरा – लमजुङबाट शुक्रबार पोखरा आएका दीपेन्द्र श्रेष्ठ शनिबार फेवाताल किनार बाराहीघाट पुगे। साँझपख उनी पुग्दा तालको पानी ह्वात्तै घटेको थियो। कामना विकास बैंकको स्टाफ मिटिङका लागि पोखरा आएका श्रेष्ठ र उनका साथीहरूले तालको पानी भने छुनै नसकिने गरी पर पुगिसकेको थियो। ‘तालको पानी त ह्वात्तै सुकेछ’, उनले भने, ‘कति छिटो फेवातालको पानी घटेछ।’ तालमा […]
जसले आमासंग माफी माग्दै परदेशमा गरे आ’त्मह’त्या !
January 8, 2021 adminLeaveaComment on जसले आमासंग माफी माग्दै परदेशमा गरे आ’त्मह’त्या !
बझाङ – बझाङका २७ वर्षीय दिनेशकुमार कुँवरले पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आफू बसेको होस्टेलबाट हा’म फा’लेर आ’त्मह’त्या गरेका छन् ।पोर्चुगलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका कँुवरको शुक्रबार नेपाल जाने तयारीमा रहेको अवस्थामा फेसबुकमा ‘मिल्ने भए दुःख हटाइ खुशी किन्थेँ आमा, आफ्नो को हुन् पराइ को हुन् सबै चिन्थेँ आमा’ स्टाटस सेयर गरेर आफू बस्दै आएको होस्टेलको चार तलाबाट हा’म […]
December 9, 2020 adminLeaveaComment on मलेसियामा चन्द्र कुमारीको मृत्यु, परिवारलाई सहयोग स्वरुप १ लाख २५ हजार ७०३ रुपैयाँ
क्वालालम्पुर (मलेसिया) – वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिगत ७ बर्षदेखि मलेसियामा काम गर्दै आएकि नेपाल ठेगाना म्याग्दी धौलागिरी गाउँपालिका. ५ कि चन्द्र कुमारी छन्त्यालको मलेसियामा अल्पआयुमै मृत्यु भएको छ। मलेसियाको जोहोर राज्यमा पर्ने तेब्राउ भन्ने ठाउँमा अवस्थित (OSI optoelectronics) ओएसआई ओपटोइलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्दै आएकि चन्द्र कुमारी अच्चानक सिकिस्त बिरामी परेकि थिइन्। स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत चन्द्र […]